Mitombo Ny Sivana Amin’ny Haino Aman-Jery Any Pakistàna Fa Manakaiky Ny Fifidianana Solombavambahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 15:20 GMT
Sary tao amin'ny Pixabay , an'i dimitrisvetsikas1969 | CC0
Miomana ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka kasaina hatao amin'ny herinandro amin'io ambony io i Pakistàna ary dia misy ny tsaho momba ny famoretana mafonja atao amin'ny haino aman-jery.
Tamin'ny 12 jolay 2018, ny Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) dia nandidy ny fandraràna ny fandefasana mivantana ataon'ny fantsom-pahitalavitra alaina amin'ny zanabolana ny kabarin'ireo mpanao politika mandritra ny fampielezankevitr'izy ireo.
Napetraka ilay fandraràna ho fisakanana ny fantsona TV alaina amin'ny zanabolana tsy hampiseho votoaty “manafintohina” sy “manala baraka”. Izao no lazain'ilay fampahafantarana :
Tsy maintsy manome antoka ireo fantsom-pahitalavitra alaina amin'ny zanabolana fa tsy handefa na hampita amin'ny fahitalavitra ireo votoaty/lahateny/valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety/ doka ara-politika feno fankahalàna, manala baraka, mametsifetsy, manafintohina, izay mety hanozongozona ny fiandrianan'ny fitsaràna na ny tafika pakistaney, na ireo andrim-panjakana hafa, ny tsirairay, ireo antoko politika, ny fizotry ny fifidianana, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana , na mivantana na efa voarakitra.
Voasivana tamin'ny fahitalavitra sy ny tambajotranà onjapeo ny kabarin'ilay praiminisitra teo aloha Nawaz Sharif, rehefa tonga tany Pakistàna izy mba hitsipaka ny didim-pitsarana nanameloka azy sy ny zanany vavy ho nanao kolikoly. Ara-teknika, tsy nihanaka tamin'ny fanaovana tatitra amin'ny aterineto ilay fandraràna, satria efa voasivana ihany koa ny lahateny momba ny fifidianana ao amin'ny aterineto.
Na tsy nilatsaka ho fidiana intsony aza i Sharif, dia misy mpilatsaka ho fidiana ao amin'ny antokony, PML-N, isan'izany ny vadiny. Ny vondron'ny tafika any Pakistàna dia fantatra fa manome vàhana ny antoko mpanohitra, PTI.
Maro tamin'ireo mpanao gazety no mahita io fandraràna io ho famelezana (fanakianana) ny fahalalahan'ny fanehoankevitra. Nibitsika ny mpanao gazety Taneela Mazhar :
Tsy hoe tsy misy ny fitiavana an'i MNS fa ny baiko vaovaon'ny PEMRA no tsy misy dikany tsotra izao, manome voninahitra ho an'ny mpampihorohoro isika ary mampiseho marika fandresena ho an'ireo olona maro voaheloka, eny fa na dia amin'ny raharaha vonoan'olona aza. Nahoana no ho an'i MNS ihany io tazo-na etika io ?
Fanamarihana : Nawaz Sharif no atao hoe MNS.
Nibitsika ny mpanao gazety iray hafa, Matiullah Jan :
Misy ny mampiasa ny PEMRA tsy misy tanjona mba hanamafisana ny fatotra atao amin'ny zon'ny olona hahafantatra sy hiteny malalaka. Amin'ny fotoana hanaovana ny fifidianana, raha ohatra ka hatao izany, dia tsy handrenesam-peo sy tena lany henatra ny haino aman-jery.
Nolazain'ny sasany fa voamarina ilay fandraràna, satria efa voaheloky ny Fitsaràna Mitsara ny maha-tompon'andraikitra any Pakistàna ho nanao kolikoly i Sharif. Nibitsika ny Dr M Siddique :
Tsy misy ve ny lalàna hampitsaharana ny fanehoana ireo MPANAO HELOKA BEVAVAN'NY PLMN voaheloky ny SCOP sy ny NAB, izay mangataka ny ho fidiana saika manerana ny fantso-pahitalavitra rehetra ?
Midika izany fa ireo mpanao heloka bevava rehetra any AM-PONJA ihany koa dia manana faniriana tahaka izany mba hikarohana fangorahana
Fiasanà REPOBLIKA MPANAO KOLIKOLY ny fiasantsika, na efa izay mihitsy isika !
Fanamarihana: NAB dia ny National Accountability Bureau
Na izany aza, ny sasany dia nihevitra fa fanomezana hery ny fianakaviana Sharif ilay fandraràna tamin'ny alàlan'ny famoriana ireo mpanohana ilay fandraràna. Nanoratra tao amin'ny Twitter ilay tanora mpikatroka mafana fo, Ameeza Zia :
Nahalasa adala ny governemanta vonjimaika ny #sherayasheraya. Nodidian'ny PEMRA ireo fantsona tsy handefa fandrakofana mivantana, voabahana ny làlana, voasakana ny mpitarika ny ligy N. Izao ve no atao hoe fametrahana fifidianana Malalaka sy tsy mitongilana sa fanampiana ny Sharifs hiha-hatanjaka kokoa ?
Fanamarihana : Sheraya sheraya dia midika hoe “ tonga ny liona, tonga ny liona” (Liona no marika famantarana an'i Nawaz Sharif amin'ny fifidianana )
Ny sasany dia nihevitra fa misy fandraisana anjaran'ny tafika ao amin'ilay fandraràna.
Mampitandrina ireo fantsom-pahitalavitra ny Pemra mba tsy ‘handefa votoaty manafintohina sy manala baraka’
“votoaty manala baraka ny fahefàm-pitsarana sy ny tafika no alefan'ny fandaharan'ireo fantsona,” hoy ny fandinihan'ny gazety — DawnNews
Lazao ry zareo mba hampiato ny milina politika amin'ny fifidianana 2018 — Awam
Voarara tsy mahazo mamoaka ny valim-pifidianana ny BBC, Deutsche Welle ary ny Voice of America izay mandrakotra ny fifidianana solombavam-bahoaka Pakistaney. Nizara lahatsoratra ilay poloney mpanoratra, Krzysztof Iwanek :
Raràn'i Pakistàna ireo fandaharam-baovaon'ny BBC (Sairbeen), ny Deutsche Welle (DW Sawal) ary ny Voice of America (View 260). Lazain'ny Pemra fa tsy nahazoana alàlana ny asan-dry zareo nefa vao haingana no nisy tranganà sivana hafa tany Pakistàna.
Dingana ho amin'ny fifidianana amin'ny volana Jolay ?
” Karazana sivana ratsy indrindra ” no namaritan'ilay mpandraharaha pakistaney, Sareer Ahmad Khan, izany :
Marina ve fa noraràn'ny #Pemra tsy handefa ny fandaharana urdu-n'ny @URDUVOA @BBCUrdu @dwnews ireo fantsom-pahitalavitra ? Raha izany no izy, dia ity no karazana sivana ratsy indrindra mialoha ny fifidianana. @gulmeenay
Tsy nahazo nandefa ireo antsafa tamin'i Sharif efa voarakitra mialoha ihany koa ny fantsom-baovao pakistaney.
Milaza ireo antoko sasany fa lasa soron'ilay fandraràna ihany koa ry zareo. Izao no tenin'ny filohan'ny Antokon'ny Vahoaka Pakistaney, Bilawal Bhutto Zardari, tao amin'ny tafatafa ho an'ny mpanao gazety :
Miatrika sivana ny gazety, gadraina ny mpanao politika mafana fo, tsy fanitsakitsahana ny zon'olombelona fotsiny izany fa fangalarana mialoha ny fifidianana ihany koa.
Lasa resabe ilay fanitsiana ny Andininy faha-5 ao amin'ny didy hitsivolan'ny PEMRA. Araka ny voalaza ao amin'io andininy io, tsy ananan'ny governemanta zo ny hibaiko amin'ny fametrahana fitsipika mifandraika amin'ny votoaty alefa. Vondrona federaly mahaleo tena ny PEMRA, nefa mety ho antony ara-politika ny asany.
Manana tantara lava momba ny sivana i Pakistàna tahaka ny vondrona mpanome vaovao nahazo fandraràna sy karazana sazy hafa, amin'ny atao hoe ezaka fifehezana ny lahateny imasom-bahoaka. Tsy niatrika fotsiny lahateny feno fankahalàna ireo mpanao gazety fa norahonana, alaina an-keriny ary vonoina mihitsy aza. Ao amin'izany tontolo izany ve dia azo atao ny fifidianana malalaka sy tsy mitanila?